Mbrɛ Ibesiesie Woho Ama Jehovah Adasefo Nhyiamu Ahorow No
Sɛ enye Jehovah Adasefo no mu kor rusũa Bible no a, obotum aba dɛ, aber biara no idzi kan sũa nsɛm a wobosusũ ho no ansaana wo kyerɛkyerɛnyi no aba. Ɔbɛyɛ papa dɛ ebɛyɛ dɛmara so ansaana aakɔ asafo nhyiamu, na eenya mfaso pii. Sɛ yebenya dɛm mfaso no a, gyedɛ yɛyɛ nhyɛhyɛɛ pa sũa adze.
Paw mber nye bea a ibosũa adze. Ebɛn aber na ibotum dze w’adwen esi biribi do yie paa? Ana ɔyɛ anapaatu, ansaana ebɛhyɛ w’edwuma ase wɔ da no mu? Anaa ewimber, aber a wo mba adeda ekyir no? Sɛ mpo irunntum mmfa mber tsentsen nnsũa adze a, yi mber bi si hɔ a edze bosũa adze, na bɔ mbɔdzen dɛ eremma biribiara mmbɔbɔ mu. Hwehwɛ beebi a hɔ yɛ dzinn, na yi biribiara a obotum atwetwẽ w’adwen akwa dze nam wo redio, TV nye fon a ibodum no no do. Mpaa a ebɔbɔ dze ahyɛ adzesũa no ase no bɔboa wo ma eeyi da no mu dadwen efi wo do na edze w’adwen eesi Nyankopɔn Asɛm no do.​—Philippifo 4:6, 7.
Hyehyɛ mbuae ahorow no nsew, na siesie woho dɛ edze woho bɛhyɛ adzesũa no mu. Dzi kan hu adzesũa no enyiwa do. Dwen asɛntsir no ho, susũ mbrɛ asɛntsir kakraba biara fa asɛntsir no ho, na susũ mfonyin ahorow nye nsɛmbisa a wɔdze yɛ ntsĩmu a ɔfa nsɛntsitsir a ɔwɔ adzesũa no mu no ho. Afei, kenkan nkyekyɛmu biara na hwehwɛ nkyekyɛmu biara n’asɛmbisa ho mbuae. Hwehwɛ na kenkan kyerɛwnsɛm a wɔatwẽ adwen esi do wɔ adzesũa no mu no, na susũ mbrɛ ɔfa adzesũa no ho. (Ndwuma 17:11) Sɛ ihu asɛmbisa biara ho mbuae a, twa nkasafua anaa nsɛmfua kakraabi a ɔwɔ nkyekyɛmu no mu a ɔbɛma akaa mbuae no ase, anaa fa biribi hyɛ no nsew. Afei, wɔ nhyiamu no ase no, ibotum ama wo nsa do na edze woara wo nsɛm ama mbuae tsiabaa bi.
Sɛ epɛnsapɛnsa nsɛm ahorow a wosusũ ho wɔ nhyiamu ahorow no ase dapɛn biara no mu a, ibenya nsɛm afofor dze akã wo Bible mu nyimdzee ‘adzekorabea’ no ho.​—Matthew 13:51, 52.
Ebɛn nhyehyɛɛ pa na ibotum ayɛ dze esiesie woho ama nhyiamu ahorow no?
Ebɛyɛ dɛn esiesie woho ama mbuae wɔ nhyiamu ahorow no ase?
Dzi dɛm akwankyerɛ ahorow a yɛakã ho asɛm yi ekyir na siesie woho ma Watchtower Adzesũa anaa Asafo Bible Adzesũa. Ma wo Bible kyerɛkyerɛnyi no mboa wo na siesie wo mbuae a ebɛma wɔ nhyiamu a odzi hɔ no ase.
Ɔkwan Bɛn Do Na Jehovah Adasefo Yɛ Hɔn Nhyiamu Ahorow?
Hwɛ ɔkwan a yɛfa do som.
Yɛbɛyɛ Dɛn Esiesie Hɛnho Yie Ama Christianfo Nhyiamu Ahorow No?